DAAWO: Wada hadaladii Puntland & DF Soomaaliya ee kasocday Boosaso oo fashilmay & Qodobada keenay fashilkooda.
BOOSAASO(P-TIMES) – Wasiiro katirsan Xukuumadda Faderaalka Soomaaliya, kana soo jeeday Puntland ayaa shalay booqasho ku tagay magaalada Xeebta kutaala ee Boosaaso, halkaas oo ay kulan waqti dheer qaatay kula yeesheen Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ay ka wada hadleen xariirka u dhaxeeya labada dhinac, gaar ahaana in ay wada hadal gaar ah ka yeeshaan qodobada ay dhinacyadu isku hayaan.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in aysan waxba kasoo bixin kulamadan oo socday wax ka badan 7 saacadood, ayna isku mari waayeen qodobadii ay la yimaadeen wafdiga dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Qodobada ugu badan ee dooda ka timi, waxaa kamid ahaa in uu Madaxweynaha Puntland baajiyo safar uu ku aado magaalada Kismaayo, taas oo ay sheegen in ay tahay mid garab-marsan sharciyada dalka.
Wasiiradda ayaa sheegay in safarkaas aadidiisa ay Puntland ku qabsi karto waxyaabo badan, Xukuumadda Faderaalkuna aysan raali ka aheyn oo aysan aqoonsaneyn doorashadii Axmed Madoobe dhawaan dhacday.
HALKAAN KA DAAWO WARKII DAMBE
Puntland, ayaa sheegtay in aysan ka baaqsan doonin safarka magaalada Kismaayo oo ay ka qeybgali doonaan Caleema-saarka Axmed Madoobe, wixii kale oo dhan ay ka wada hadli karaan dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Puntland, waxay sheegtay in ay diyaar u tahay wada hadal daahfuran oo ay dhinacyada oo dhan si dhab ah uga wada hadlayaan waxyaabaha keena khilaafyada, gaar ahaana xataa ay qeyb ka qaadanayso sidii ay heshiis u dhexdhigi lahayd Axmed madoobe iyo madaxda dawladda Faderaalka.
Markii ay dhamaatay cashadii labada dhinac, ka dib wafdiga Federaalku waxay sheegeen in haddii aysan Puntland ka baaqsan safarka Kismaayo, ay tagi doonaan aroornimada hore, sababtana ay ka dhigeen in aysan jirin wax kale oo laga wada hadlayaa ayna tahay amar Madaxda sare ee dawladda Faderaalka kayimi.
Kulamadaas ayaa kusoo dhamaaday fashil, waxaana muuqata in labada dhinac uu markale u bilowday hardan culus oo aan la saadalin karin dhamaadkiisa.